Mpilalao ramy, mifampihinana izy samy izy ihany
mardi, 19 avril 2022 20:53
Matetika dia samy fianakaviana ihany no miloka manao ramy, na manao loto. Andeha atao hoe fialam-boly, fa rehefa zohina, dia tsy misy famokarana na fampitomboana harikan-karena na ny kely aza, satria dia ny vola ao ampaosin'ny iray ihany no mifindra tanana mandeha amin'ny iray hafa, dia mifandimby banky, na very vola tanteraka eo.
Dia io very vola io mitrosa amin'ilay nahazo ny volany indray, mety misy zanany kely aloany amboniny, fa ny eo ihany no miodikodina eo.
Mila tsakitsaky sy zava-pisotro kely mandritra ny loka na lalao, nefa dia fianakaviana eo ihany no manao ilay tsaky, dia mihodina eo ihany ny vola, tsy nisy tombony mivaingana ho an'ilay fianakaviana, fa nifandimby nandray vola sy banky fotsiny ny tsirairay.
Toy izany ny toe-karena eto amintsika, tsy misy mamokatra firy, fa ny atsasaky ny olona mpivarotra, ny atsasany mpividy, samy mihaona eny an-tsena, tsy misy mamokatra, fa ny eo ihany no miodikodina samy isika eo.
Ka tsy gisitra ihany ve, hay moa efa nitrosa tany amin'ny banky iraisam-pirenena isika, dia nomeny kado 50%, vola averina 30-50 taona ireny amin'ny zanany 1-2% eo, ka raha 2% isan-taona amin'ny 50taona, dia ny zana-bola izany 500 000 000$ amin'ny renivola 250 000 000$ notrosaina, ka raha nomeny fanampiana tsy averina izany ny 250 000 000$, dia mbola mahazo tombony 50% izy izany mitentina 250 000 000$.
Satria ireny fanampiana ireny dia vokatry ny latsakemboka arotsaka tsika hatrany, izay firenena tafiditra anatin'ireo faran'izay mahantra, dia anaovan'ny firenena hafa koti kota tsy hisarika ny toe-karena maneran-tany hidina.
Mamerina 500 000 000$, na 1 900 miliara ariary, amin'ny Banky iraisam-pirenena mandritra ny 50 taona isika izany.